Lockheed L-1049 Super-kintana
fanontaniana Lockheed L-1049 Super-kintana
2 taona 2 volana lasa izay #141 by PAYSON
Inona no zava-miafina ny fiaramanidina fiaramanidina ity ny 5-6 minitra tsy tanteraka maotera tsy fahombiazana? Tsy iray monja maotera amin'ny fotoana, fa izay indray mandeha monja. Efa nanana foana toerana ato am-poko ho azy ireo, indrindra rehefa tanteraka ny tafika an-dranomasina volondavenona, recon karazana (miaraka amin'ny kofehy lehibe Radar kapila) dia hanidina eo an-tranonay avy amin'ny Naval Air Station dia nametraka ny raiko.
2 taona 2 volana lasa izay #142 by Rolando
Manana olana toy izany koa ny namana sy ny ahy. Misy vahaolana tsara: ny ara-dalàna atonton-kintan'i (tsy faran'izay) dia manidina tsy misy fahadisoana ...
2 taona 2 volana lasa izay #144 by PAYSON
Misaotra anao noho ny valin-teninao. Fantatro fa ao amin'ny toromarika - ny - miasa, (ao anatin'ny "vakio-aho) tsy mihoatra ny iray RPM fampiasana manaraka maka-eny, fa izany no azo atao fotsiny .... dia latsaka amin'ny tany, dia mila ny hery rehetra mijanona ny. Ary izany rehetra tsy maintsy atao dia ny mahatakatra ny fomba Pix hizara aminareo ry zalahy.
Ary koa, misaotra PAYSON
2 taona 2 volana lasa izay #161 by Gh0stRider203
no hanokatra ny cowl mikopaka?
2 taona 2 volana lasa izay #162 by PAYSON
Vao nanandrana ny misokatra cowl mikopaka .... rehefa mafana-up dia nihanika tsy mora 4K, nanao kosa indray fipetrahany izy. Valo any an-sidina, vacuum gauges nanomboka nandeha kely tsirairay. Soooo, rehefa avy 8 minitra, dia latsaka tahaka ny vato. Fa, Hey, izany an-tsoratra. Misaotra ny Info anefa, dia mankasitraka azy io.
2 taona 2 volana lasa izay #165 by Gh0stRider203
Aho "vitsy" FB vondrona for FSX. Mangataka aho manodidina ho ya Na dia nahazo buddies vitsivitsy izay mahafehy ny nanidina ny B-17, ka hijery aho aminy koa Ny Connie no manaraka aho vorona nanampy ny VA ny sambo, indray mandeha dia mahazo ny sisa ny vorona vokany.
Azoko ampy mba handoavana ireo vola izao ny 767-200ER, izay mandao ny roa, ary ny roa 748Fs 772LRs. Ny 744LCF sy ny 748s dia ny vola lehibe mpamokatra, aza ny 772LR, rehefa mety tsara ny sidina payload miakatra dia afaka mitondra amin'ny karama bebe LOL fa mamy ny manaraka Raha ny marina dia tsy mendrika iray raha Aogositra ary mazava ho azy ny dia, tokony hanana rehetra ny vorona vokany LOL
2 taona 2 volana lasa izay #178 by PAYSON
Wow Masina ... toa tsara sy ny fisaorana ho an'ny ny ahiahy. Aaaaah, B-17 ny. Matetika aho no mitaingina ao anatin'ny iray na fahafahana mahazo aho. Raha toa ve ianao no mety ho mitaingina iray fantatra amin'ny hoe "The Aluminum Nanjombona", dia ataovy izany. (Raha tsy efa) izy naorina tara ao amin'ny ady, ary nentina tany Angletera. Toy ny lahatra hanana izany, nifarana ny ady teo amin'ny fahatongavany. Noho izany, tsy ampiasaina ao amin'ny ady. Tena be voninahitra ao anatiny sy avy. Walkways hazo rehetra sy ny rambony toy ny tsy Trolley basy nampiasaina. Jereo azy amin'ny tsipika ny mahita Izay ho hitsidika. Raha mahazo mitaingina, ho voalohany amin'ny andalana (nataoko ka nahazo ny halàna sy tany amin'ny seza Hanketo tsara ambadiky ny mpanamory), ary tena hitondra soa ny fakan-tsary.
2 taona 2 volana lasa izay #186 by tnig
Avy any an-README rakitra ho an'ny Connie. Araho ireo ary ianareo ho tsara. Ianao no tsy maintsy hanitsy hevi-dehibe ho an'ny tsara RPM mba hiaro anao ho afaka amin'ny fahoriana.
(5) Ankavanana-tsindrio ny maso-marika simicon ny miantso an-tsipiriany ny sata varavarankely
mampiseho zava-dehibe sy ny fiaramanidina readouts motera.
(7) Engine tsy fahombiazana dia mety ho tonga rehefa niasa ny fitaovana ireo amin'ny
2800 + RPM ho an'ny vanim-potoana intsony (mitandrema Noho izany indrindra
rehefa avy maka-eny), na raha Spark fanaraha-maso = mialoha ao amin'ny 2400 + RPM. miankina
amin'ny haavo, fitaovana dia mety tsy ao anatin'ny telo ka hatramin'ny dimy minitra. Ampiasao ny
Hevi-dehibe dity fanoitra tompony na ny Engine dity simicon hanitsy RPM toy ny
ilaina ny zava-misy amin'izao fotoana izao sidina (jereo ny lisitra). Eo amin'ny
Status tontonana, ny maotera HP readout dia mampiasa ny loko manaraka Laharana:
fotsy - OK, tsy mampidi-doza ny tsy fahombiazan'ny maotera;
mavo - ny fahefana amin'izao fotoana izao dia hahatonga fahavoazana toerana raha niala ela loatra
in ity fanahafana (na dia Manakenda indray na fanitsiana
RPM dia hitoetra mavo mandra-anatiny maotera tsy fahombiazana
Counter dia niverina ny aotra (mety ho roa minitra)
mena - asa avy hatrany ilaina - hampihenana throttle sy ny hevi-dehibe dity.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: tdhelpline
2 taona 2 volana lasa izay #187 by PAYSON
tnig .... Misaotra noho ny Info, fa zavatra iray loha - Efa tena nanao izany? Tsy manao izay mahatafintohina, fa nanandrana izany ary tsy niakatra lasa 1200 ft. Avy mafana-up amin'ny piaramanidina. Izany angamba fotsiny aho, fa izany ihany no manana olana amin'ny (35 - 45 fiaramanidina avy amin'ity faritra ity). Izay ahitana ny sasany amin'ireo Boeing lehibe indrindra, lockheed, na ny Rosiana tsy maintsy atolotra. Mihevitra aho fa nihaona ny lalao ary nanorotoro ahy. Mino aho fa "marika X" manana atolotra. Homeko azy Mandehana, raha tsy (RIP), dia lazao ny vadiko marina izy.
Indray, Misaotra sy jerena, PAYSON
2 taona 2 volana lasa izay #188 by Gh0stRider203
izay manao izany Super Connie? Aho, dia mety ho voatery mba jereo kely izany ny tenako LOL
Fotoana mamorona pejy: 0.382 segondra